Akụkọ - Akụkụ ngwa nke ngwaahịa aluminom alloy.
Ngwa ubi nke aluminom alloy ngwaahịa.
• Aluminom na-ewu ụgbọ ala ka mma. Ojiji aluminom na-eji ụgbọ ala na ụgbọ ala azụmahịa na-eme ngwa ngwa n'ihi na ọ na-enye ụzọ kachasị ngwa ngwa, nke dị nchebe, nke kachasị mma na gburugburu ebe obibi na ọnụ ahịa bara uru iji mee ka arụmọrụ dịkwuo elu, kwalite akụ na ụba mmanụ ọkụ na ibelata ikuku. Aluminom Association's Aluminum Transportation Group (ATG) na-ekwupụta uru nke aluminom na njem site na mmemme nyocha na mmemme mgbasa ozi metụtara ya.
• Ụlọ & Mwube
• Aluminom bu ụzọ jiri ya mee ihe maka ụlọ na ihe owuwu na 1920s. Ngwa ndị a dabere na nkọwapụta ihe ịchọ mma na ihe ndozi nka. Ọganihu a bịara na 1930, mgbe e ji aluminom rụọ nnukwu ihe owuwu dị n'ime Alaeze Ukwu State Building (gụnyere ihe ndị dị n'ime na spire a ma ama). Taa, a na-amata aluminom dị ka otu n'ime ihe ndị na-arụ ọrụ ike na-adịgide adịgide. A na-eme atụmatụ na pasent 85 nke aluminom a na-eji eme ihe n'ụlọ ndị e wuru taa na-abịa site na ihe eji emegharịgharị. Ụlọ LEED kwadoro nke ọma na aluminom enwetala ihe nrite maka Platinum, Gold na nkwado kacha mma na steeti n'ofe mba ahụ.
• A na-eji eriri eletrik nke dabeere na aluminum mee ihe maka ngwa ọrụ na mmalite 1900s. Ojiji nke aluminom wiring tolitere ngwa ngwa mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, ọ na-edochikwa ọla kọpa dị ka onye na-eduzi nhọrọ na grids ịba uru. Igwe ahụ nwere uru dị oke ọnụ na uru dị arọ karịa ọla kọpa ma ugbu a bụ ihe kachasị amasị maka nnyefe ọkụ eletrik na ojiji nkesa. AA-8000 usoro aluminum alloy conductors nwere ihe karịrị afọ 40 nke a pụrụ ịdabere na ubi nrụnye na a ghọtara kpọmkwem site National Electric Code maka ihe karịrị iri afọ atọ.
• Eletrọnịkị & Ngwa
• Ngwa ụlọ - igwe ịsa ahụ, igwe nkụ, friji na laptọọpụ - dị ka ọ dị taa n'ihi ịdị arọ nke aluminom, ike nhazi na njirimara ọkụ. Ụdị akara ngosi na-agbatị site na West Bend's 1970 Presto Cooker ruo Apple's iPod, iPad na iPhone na-ekerịta otu njirimara: ojiji nke aluminom.
• Foil & nkwakọ ngwaahịa
• Enwere ike ịchọta mmalite nke foil aluminum site na mmalite 1900s. Ndụ nchekwa ndụ—otu n'ime candies kasị ewu ewu taa—bụ nke mbụ chịkọtara na foil na 1913. Ruo taa, a na-etinye ọgwụ ndị ahụ n'ime tube foil aluminum a ma ama n'ụwa. Ojiji nke foil etoola n'ime 100 afọ gara aga na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ na-adịghị agwụ agwụ. Site na ihe ịchọ mma osisi ekeresimesi na mkpuchi ụgbọ elu, nri abalị TV na ngwugwu ọgwụ - aluminom foil nwere, n'ọtụtụ ụzọ, kwalite ma ngwaahịa anyị na ndụ anyị.
• Ahịa ndị ọzọ
• Ebe ọ bụ na ewebata aluminum n'ime nnukwu ahịa US na mmalite 1900s, ọbịbịa nke ígwè a etoola nke ukwuu. Ka aluminom na-abanye na narị afọ nke abụọ nke iji ya eme ihe, teknụzụ sayensị ọhụrụ na mmepụta ihe na-aga n'ihu na-agbasawanye ikike ahịa ya. Igwe igwe nanotechnology nke anyanwụ, alloys aluminum transperent na batrị aluminom-ikuku ga-enyere aka na-eduga na mmepe nke ahịa ọhụrụ na nke ọhụrụ na narị afọ nke 21st.
Nke gara aga: Uru nke nkedo anwụ anwụ.
Osote: Ihe ọmụma nke ngwaahịa nkedo ígwè.